PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-01-10 - Likhu­phuk­ile izinga lemi­phumela ka­matikulet­sheni ku­lonyaka
Likhu­phuk­ile izinga lemi­phumela ka­matikulet­sheni ku­lonyaka
ZIKHUPHUKILE iz­ibalo zokuphasa kwaba­fundi basezikoleni sase­makhaya ebebenza ibanga leshumi ngonyaka ofile.
Ukuz­imisela kwal­aba ba­fundi kukhom­bise ukuthi nakuba ben­ge­nazo izin­siza­ku­funda ezanele kodwa ukusebenza ngokubam­bisana phakathi koth­isha naba­fundi kuletha izith­elo ez­in­comekayo.
Omunye waba­fundi ophumelele kahle,uNkosenhle Mthethwa,waseWe­labasha High School, ngaphansi kuka­masi­pala waseM­folozi, ubonge kakhulu oth­isha abazinikele nangez­im­pela­sonto uku­zoba­fundisa ukuze bek­wazi ukuqeda um­sebenzi wonyaka kuse­n­e­sikhathi nokubenze babe ne­sikhathji esanele sokubuyekeza iz­ifundo zabo.
UNkosenhle uveze ukuthi phezu kwez­imo ez­inz­ima ebe­be­funda ngaphansi kwazo, njen­gokuhamba am­a­banga amade ngaphambi kokufinyelela ezikoleni kuh­langene ne­mi­fula ebigcwala kakhulu uma kunez­imvula ezinkulu akubakhubazanga ez­inhlosweni zabo zoku­phumelela ez­i­fundweni zabo.
OkaNyam­bose uthi kokunye aba­fundi be­be­buye bab­hekane neng­wadla yez­imo ze­mindeni abavela kuyo.
‘Abanye bethu se­bethem­bele kuhu­lu­meni ukuthi baqhubeke nem­fundo yabo emazin­geni aphakeme ngoma imin­deni yabo idonsa kanz­ima ngak­wezez­i­mali,’kubeka uM­thethwa.
Uphethe ngokubonga kakhulu oth­isha babo aban­gaseben­zeli ukuhola kuphela kodwa abanom­gomo abaz­ibekele wona wok­wenza isiqinisek­iso sokuthi ekuphe­leni konyaka kungabibikho umt­wana noma abazali abazokhala ngabo uma seku­phuma imi­phumela.
Omunye woth­isha ofundisa en­daweni yase­makhaya, ogama lakhe ligodliwe,ubonge kakhulu uhu­lu­meni kanye nom­nyango wezeM­fundo ngokuthuthuk­isa ezinye zezikole sase­makhaya njen­goba sezikhona ez­i­fana ncimishi nezise­madolob­heni ngokuba nezin­siza kusebenza ezenele nok­wenza um­sebenzi ungabinz­ima uma be­fundisa. Ugcine ngelokugqugquzela zonke iz­inhlaka ez­i­fana nezi­gungu ezi­lawula izikole, oth­isha kanye nabazali kuze kuy­ofika phansi ebant­wa­neni ukuba zibam­bisane ngazo zonke izikhathi ukuze kuthi ekuphe­leni konyaka bakhiphe imi­phumela emihle.Ophethe uMnyango wezeM­fundo es­i­Fun­deni saseKing Cetshwayo, uMnuz. David Chonco uthe ezikoleni ezingu 93 abanazo ezise­makhaya izona ezisebenze kahle kakhulu ngokukhu­phula izinga loku­phumelela kwa­bant­wana ebebenza izinga leshumi.
‘Si­bonga ukuzinikela koth­isha kanye naba­fundi kusukela kuqala un­yaka kuze kube sekuphe­leni jnokuy­into eye­nze kube noku­phumela kwa­bant­wana abaningi es­i­Fun­deni sakithi,’kubeka uMnuz. Chonco
Ru­ral We­labasha High School pro­duces ex­cel­lent re­sults
Ibin­jena in­jab­ulo kuba­fundi We­labasha okun­gesinye sezikole za­se­makhaya ezenze kahle